Indray mijery - ewa.mg
News - Indray mijery
Mitohy ny fanampiana avy amin’ireo
malala-tanana hiadiana amin’ny valanaretina Covid-19 eto
amintsika. Nanolotra fitaovana maromaro ho an’ny
prefektoran’Ambatondrazaka ny orinasa japoney, Daiho. Nahitana
arovava miisa 3 000 sy “gel désinfectant” maromaro karazana ary
savony ireo fanampiana voaray.
Nidina tany an-tampon-tanànan’Ambilobe ny minisitry ny
Rano sy ny ekipany namaha ny olana momba ny rano.
Paompin-drano 64 tsy nandeha teo aloha no efa mahazo rano sy afaka
mamatsy rano madio ho an’ireo olona ao an-tanàna ankehitriny.
Apetraka tsara ny fitantanana ny fotodrafitrasana momba ny rano,
iarahana amin’ny tompon’andraikitra any an-toerana hampaharitra ny
L’article Indray mijery a été récupéré chez Newsmada.
« Labdihy »: manomboka androany ny fikarohana
Mifanome fotoana, ao amin’ny Studio Rary ao amin’ny Tahala Rarihasina etsy Analakely, indray ireo matihanina amin’ny soradihy sy ireo rehetra mankafy sy liana amin’izany, androany. Ity ny fotoam-panokafana ny « Labdihy » andiany fahavalo, hetsika novolavolain’i Ariry Andriamoratsiresy ary tontosaina isaky ny roa taona.Miavaka amin’ireo hetsika mahakasika ny dihy ankehitriny ny « Labdihy », izay sehatra iray hanomezan’ny tsirairay, ireo matihanina amin’ny soradihy, ny aingam-panahiny sy ny talentany ary ny teknikany, ahafahana mamoaka zava-baovao. « Labdihy » na laboratoara ho an’ny dihy, fotoana natao hanaovana fikarohana.Miompana amin’ny hoe “Ny fetra sy ny faritra eo amin’ny seha-javakanto samihafa” ny lohahevitra amin’ity andiany fahavalo ity. Ankoatra ny tanora mpanao soradihy eto an-toerana, maromaro ireo vahiny namaly ny antso, toy ny avy any Maorisy, Mozambika ary Rodrigues.Aorian’ny etsy amin’ny Tahala Rarihasina, hitohy eny amin’ny lapan’ny Kolontsaina etsy Mahamasina sy ao amin’ny IFM etsy Analakely ny fifanakalozana sy fikarohana hataon’ireo mpanao soradihy, hatramin’ny 24 aogositra izao.Landy R. L’article « Labdihy »: manomboka androany ny fikarohana a été récupéré chez Newsmada.
Fahamaizan’ny biraon’ny ONE : maro ny antontan-taratasy may, avotra ny “serveur informatique”
Nanomboka tamin’ny 8 ora sy sasany alina ny fahamaizan’ny Ofisim-pirenena misahana ny tontolo iainana (ONE). Ho an’ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny harena lovainjafy (Medd), Rahari­nirina Vahinala Baomiavotse, mahagaga ihany ny nahamay ity birao ity amin’ny andro alina, sady tsy ao anatin’ny vanim-potoana fahavaratra isika izao, fotoana tsy tokony hisian’ny fikorontanan’ny he­rinaratra (cour circuit). Fanta­tra, omaly, fa nametraka fitoriana amin’olon-tsy fantatra (palinte contre X) ny minisiteran’ny Tontolo iainana. Nam­baran-dRtoa minisitra, omaly, fa “manaja ny asan’ny mpanao fanadihadiana ny minisitera, mpitory”. Nambarany koa fa vakoka ho an’ny fanjakana sy i Mada­gasikara ity trano ity, anisan’ny tranainy indrindra amin’ny tranom-panjakana. Noho izany, tsy maintsy jerena ny fomba hanarenana azy. Mandra-pa­havita izany, hodinihina ny ha­metrahana vonjimaika ny bi­raon’ny ONE any amin’ny minisitera MEDD, mety ho eny Nanisana na Ampandria­nomby. Etsy an-kilany anefa, nilaza koa ny minisitra Raha­rinirina Vahinala, fa misy ny sehatra tsy miankina nanolo-tanana ny hamindrana vonjimaika ny biraon’ny ONE.Avotra ny “serveurs” informatikaAndraikitry ny ONE ny manao ny fanadihadiana ny fiantraikan’ny asan’ny orinasa amin’ny tontolo iainana (EIE). Izy koa no manome ny fahazoan-dalana ara-tontolo iainana ho an’ny orinasa na tetikasa. Notsorin-dRtoa minisitra fa marobe tokoa ny antontan-taratasy may. Soa fa avotra ny firaiketana ara-informatika (serveurs), ahafahana manana antontan-kevitra araka ny informatika fa maro koa anefa no very. Nomarihiny manokana fa tsy marina velively ny sion-dresaka mandeha fa nodorana ny ONE, noho ny raharaha andramena. “Tsy misy ifandraisan’ny ONE ny raharaha andramena”, hoy izy.Njaka AndriantefiarinesyL’article Fahamaizan’ny biraon’ny ONE : maro ny antontan-taratasy may, avotra ny “serveur informatique” a été récupéré chez Newsmada.
Fitakiana ireo nosy kely « Iles eparses » :: Hovitaina mialoha ny 26 jona 2020 ny fifanarahana amin’i Frantsa
Nasiana tsindrim-peo manokana ny fitakiana ny famerenana amin’i Madagasikara an’ireo nosy kely miisa dimy manodidina an’i Madagasikara na « îles éparses » nandritra ny fihaonana teo amin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry sy ny Filoha frantsay, Emmanuel Macron, tany Frantsa, ny alarobia tolakandro lasa teo. Nandritra ny tafatafa natrehan’ireo mpanao gazety tany an-toeran no nanambaran-dRajoelina Andry fa: « amin’ny anaran’ny vahoaka malagasy manontolo sy amin’ny anarany manokana no hangatahany an’io famerenana an’ireo nosy kely malagasy amin’ny fitondram- panjakana malagasy io ». « Vahaolana miaraka no tadiavina ka hatao izay hahavitan’izany mialoha ny fetin’ny Fahaleovantenan’i Madagasikara amin’ny taona ho avy izany », hoy kosa ny valin-tenin’ny Filoha frantsay, Emmanuel Macron. Nandritra ny fitondrana tetezamita sy tamin’ny fotoana nitondran’ny Filoham-pirenena teo aloha, Rajaonarimampianina Hery, no efa niresahana matetika an’io fitakiana ny famerenana amin’i Madagasikara ireto nosy kely ireto, nisy mihitsy ny hetsika maro sosona notanterahina tamin’izany fotoana izany. L’article Fitakiana ireo nosy kely « Iles eparses » :: Hovitaina mialoha ny 26 jona 2020 ny fifanarahana amin’i Frantsa est apparu en premier sur AoRaha.
Harena an-kibon’ny tany: fiverenana ao amin’ny Eiti
Natao tany Frantsa, ny 18 sy 19 jona teo, ny fivoriambe iraisam-pirenena, mikasika ny Fangaraharana amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany vaventy (Eiti). Nitarika ny delegasiona malagasy ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny harena stratejika, Ravokatra Fidiniavo. Lohahevitra nodinihina ny fangaraharana amin’ny antontanisa sy ny fanorenana fitokisana, niadiana hevitra mikasika ny fahaiza-mitantana amin’ny harena voajanahary.Nilaza ny filohan’ny Eiti, i Frederik Reinfeldt, nandritra ny fihaonany tamin’ny minisitra Ravokatra Fidiniavo, fa nahafa-po ny fivoaran’i Madagasikara ary antenainy fa ho tratra ny fanatanterahana ireo teboka miisa 15 mila asiam-panitsiana, sady ho tafavoaka amin’ny fankatoavana faharoa, ny volana desambra ho avy izao.Tetibola ho an’ny EitiEtsy ankilany, nilaza ny minisitra Ravokatra Fidiniavo fa nisongadina ny zava-bitan’i Madagasikara, nandritra ny enim-bolana farany, amin’ny lafiny mangarahara, nahatonga ny fanesorana ny fampiatoana antsika, ary namitana ny tatitra ho an’ny taom-piasana 2017-2018.Nambarany koa fa sambany eo amin’ny tantara, araka ny tetibolam-panjakana 2019, no hitondra ny anjara birikiny amin’ny tetibolan’ny Eiti ny fanjakana malagasy.Tsy mitsahatra ny manentana ireo orinasa mpitrandraka hanao tatitra isan-taona, indrindra ny ny fandoavan-ketra sy ny tamberim-bidy, ny fanjakana.Tsiahivina fa nitarika ity fivoriana iraisam-pirenena tany Frantsa ity i Madagasikara, amin’ny maha mpikambana ao anatin’ny tambajotran’ny minisitry ny Tetibola ho an’ny firenena an-dalam-pandrosoana miteny frantsay antsika.Njaka A.L’article Harena an-kibon’ny tany: fiverenana ao amin’ny Eiti a été récupéré chez Newsmada.
« Rehefa nisy ny fitarainana isan-karazany tonga teo anatrehako, nisy ny tatitra isan-karazany nanambara ny tsy fetezan-javatra maromaro teo anivon’izany fifaninanana izany: nampanao fanadihadiana nitarihin’ny Bureau de coordination du contrôle des juridictions et des l’etablissement pénitentiaires (BCCJEP) ny tenako. »Io ny fanazavan’ny minisitry Fitsarana, i Harimisa Noro Vololona, teny Anosy, omaly, momba ny fifaninanana fidirana amin’ny Sekolim-pirenena fanofanana ho mpitsara sy ho mpirakidraharaha (ENMG).Naka ny Bianco ihany koa izy momba izay mety ho tsy fetezan-javatra tao anatin’izany fifaninanana izany. Maro ny zavatra hita ary voaporofo tao anatin’ny fanadihadiana maromaro. Tao anatin’izany no nanapahan-kevitra hanafoana avy hatrany ny fifaninanana.Mila ialana ny fomba sy ny dingana teo alohaMankaiza raha foanana ny fifaninanana? Hiverina indray ny dingana sy ny fombafomba arahina. Olona sy mpisehatra teo aloha ihany no hanao azy. Inona no dikany? Ahemotra kely fotsiny dia foanana, fa hiverina amin’ny taona ho avy indray: ny omaly ihany no anio, ny anio ihany no ampitso.Nanapahan-kevitra ny fiantsoana manampahaizana manokana, teratany malagasy, miaina sy mikirakira momba ny informatika tany ivelany. Mbola hoentina eo anivon’ny filankevitry ny governemanta sy ny filankevitry ny minisitra ny amin’izany satria mila fankatoavana, araka ny fanazavany.Tapa-kevitra hisintaka amin’ny dingana efa nisy ny minisiteran’ny Fitsarana, ary hametraka dingana vaovao izay tsy misy tanan’olombelona intsony afa-kikitika ny fampiasana ny informatika amin’izany.Be loatra ny tanan’olombelona mikitika an’ilay zavatra eny anelanelany, nefa lazaina fa ampiasaina ny informatika: tsy mety izay. Ny zavatra ezahina izany: fampiasana ny informatika tena izy. « Hatao izay tsy hisian’ny tanan’olombelona hikitika eny anelanelany », hoy izy ny amin’ny fanatanterahana ny fifaninanana hidirana ao amin’ny ENMG manaraka eo.R.Nd.L’article Sekoly fanofanana ho mpitsara sy mpirakidraharaha: nofoanana ny fifaninanana taona 2018-19 a été récupéré chez Newsmada.
Filan’ny tsena vahiny: tsy maintsy afangaro ve ny mozika malagasy ?
Talohan’ny nahazoan’i Madagasikara ny Fahaleovantena no fantatra fa efa nisy mpanakanto malagasy naneho ny sanganasany tany ivelany. Nitombo hatrany izany taorian’ny taona 1960. Raha ny fanjakana no nandray andraikitra be indrindra tamin’ny fandefasana ireny mpanakanto ireny tany ivelany, tamin’izany fotoana izany, taty aoriana, samy niezaka tamin’ny herin’ny tenany ny rehetra.Nahavariana fa ny ankamaroan’ireo mpanakanto malagasy nivahiny tany ivelany (tao anatin’ireo vanim-potoana ireo : ( taona1950 – taona 1980) , saika naneho ny maha Malagasy avokoa ny ankamaroany, indrindra fa teo amin’ny fitazonana ny firafitry ny hira malagasy amin’ny ankapobeny. Tao anatin’ny taona maromaro anefa izay, vitsy sisa ireo mpanakanto malagasy manao fampisehoana ivelan’i Madagasikara no mitazona izany. Toa tsy maintsy afangaro (kely na be) gadon-kira vahiny na fomba fiseho sehatra vahiny, sns, ilay kanto mampiavaka ny hira malagasy.Tsy mahavaky sehatra any ivelany intsony ve ny hira malagasy raha tsy afangaro karazan-kira na gadon-kira, na fomba fitafy na fomba fandihy vahiny ?HaRy RazafindrakotoL’article Filan’ny tsena vahiny: tsy maintsy afangaro ve ny mozika malagasy ? a été récupéré chez Newsmada.
Ankaisy – Toliara: tratran’ny polisy ireo jiolahy nangalatra zaza varira
Hitan’ny olona tao amin’ny fokontany Ankaisy i Vaoliny (ilay zaza varira nalain’ny jiolahy an-keriny), rehefa napetrak’ireo olon-dratsy tamina trano vondro (falafa) iray eny an-toerana. Vokatry ny fahitan’ny polisy avy ao amin’ny DRSP Toliara tamin’ny alalan’ny fahazoana loharanom-baovao no nahafantarana ireo jiolahy mpividy zaza varira (zaza bobo). Nametraka ny paikady rehetra ahafahana misambotra ireo jiolahy ny polisy ka noraisim-potsiny izy ireo niaraka amin’ny telefaonina finday entin’izy ireo mifandray amin’ireo olona akaiky ilay zaza varira. Araka ny nifanarahan’ny fianakaviana amin’ireo jiolahy, ny talata lasa teo ny fotoana nifanaovana amin’ireo jiolahy ka teo amin’ny Simpa ny toerana hifankahitana eo amin’ireo olon-dratsy sy ilay olona milaza fa mahita mpividy. Nasaina nifampiresaka tao anaty fiara ilay olona milaza fa mahita mpividy sy ireo olon-dratsy ka teo ry zalahy no voasambotry ny polisy. Nandritra ny famotoran’ny polisy ny nahafantarana ny toerana nametrahan’izy ireo an’i Vaoliny. Nambaran’ny polisy fa olona maromaro ny voarohirohy amin’ity raharaha halatra an’i Vaoliny ka isan’izany ireo roa lahy tratran’ny polisy. Marihina fa nalain’ny jiolahy an-keriny ny 17 aogositra ity ankizikely ity tao amin’ny fokontany Beravy, kaominina Belalanda. Mitentina 200 tapitrisa Ar no mody hoe hividianana azy vao nanaiky hanome azy ireo jiolahy. Efa tafaverina any amin’ny fianakaviany ilay zaza varira.CMSL’article Ankaisy – Toliara: tratran’ny polisy ireo jiolahy nangalatra zaza varira a été récupéré chez Newsmada.
Ny amisavisana ny ratsy… itandreman-tena
Ho vita amin’izay ny ady mivantana amin’ny valanaretina Covid-19? Na ho ela na ho haingana, tsy vita ho azy miaraka amin’izany ny fepetra ara-pahasalamana hita izao fa mahasoa sy mahatsara ka hoe tsy mila tohizina intsony: fitandroana mandrakariva ny fahadiovana na aiza na aiza, fifampitsinjovana amin’ny fiarovan-tena hiarovana ny hafa amin’ny fihanaky ny valanaretina…Na ahoana na ahoana, tsy ilaozan’ny valanaretina manana ny fotoany isan-taona: pesta, tazo… Ho toy izany koa, sanatria, ny Covid-19… aretim-baovao tsy mbola fantatra be ihany? Izay no itandremana sy iambenana. Nefa amin’izao fialana miandalana amin’ny fihibohana tanteraka izao, maro ny tsy te hisahirana intsony amin’ny fitondrana arotava, ny fanasan-tanana matetika, ny fanajana ny elanelana iray metatra…Hanao ahoana ny havoakan’ny ampitso amin’izany? Misy amin’ireo firenen-dehibe amin’izao no nanaovan’io valanaretina io tampody fohy tsy nampoizina. Voatery manao fiaingana vaovao amin’ny ady, miverina amin’ny fihibohana. Fahatokisan-tena? Na tsy fitandremana, na tsy fijerena lavitra, na maika tsy faingana tsy amin’ny antony… Ilaina ny maka lesona amin’ny lesoka hita amin’ny hafa.Tsy mbola foana tanteraka akory ny tsimokaretina: tsy hita maso, mora mihanaka, tsy mifidy olona… Efa hadino na tsy mampiraika intsony izany rehetra izany amin’izao? Mihavitsy ny mitondra ny tsimokaretina, mitombo isa ny marary sitrana… Nefa tsy mbola mahazatra ny aretina, na fantatra sy voafehy tanteraka. Ny tena no mila mifehy tena, manana faharetana. Ny firenen-dehibe aza voafitaka?Na heverina ho voafehy aza ny valanaretina, misy ny fanefitra sy ny fitsaboana: mila mitandrina sy miaro tena mandrakariva… Toy izay atao amin’ny fiatrehana ny areti-mifindra hafa izay amin’ny fotoany: pesta, tazo… Sao mafy no ho ny voalohany ny faharoa, raha izao, sanatria, no manao tampody fohy amin-kery ny valanaretina. Ny amisavisana ny ratsy, hiavian’ny soa. Itandreman-tena indrindra koa…Rafaly Nd.L’article Ny amisavisana ny ratsy… itandreman-tena a été récupéré chez Newsmada.
COVID-19: Situation du 17 Septembre 2020
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Situation du 17 Septembre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Madagascar compte actuellement 15925 contaminations selon le rapport journalier sur l’évolution du covid-19 annoncé ce jeudi 17 septembre. Au cours des dernières 24 heures, 54 personnes sont diagnostiquées positives au coronavirus sur les 595 tests effectués. Ces nouveaux cas sont localisés dans 8 différentes régions: 13 cas à Alaotra Mangoro, 11 cas à Menabe, 10 cas à Analamanga, 9 cas à Diana, 5 cas à Sava, 3 cas à Matsiatra Ambony, 2 cas à Boeny et 1 cas à Vatovavy Fitovinany. Le CCO a également communiqué que 65 patients ont recouvré la santé, portant à 14547 le nombre total de guérisons soit plus de 91%. De ce fait, 1160 malades sont actuellement en cours de traitement dont 25 développant une forme grave. Officiellement, le territoire malagasy compte 216 décès dont un signalé ce jour.L’article COVID-19: Situation du 17 Septembre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Nivoaka ary nampahafantarina sy mbola hanentanana ny rehetra, omaly tetsy Analakely, ny “Fehezam-pitsipiky ny kaominina Antananarivo Renivohitra misahana ny fikoloam-pahasalamana” (CMH). Manomboka amin’ny 5 000 Ar hatramin’ny 5 tapitrisa Ar ny sazy ho an’ireo mandika sy mihoa-pefy amin’izany.Anisan’ny andoavana 50 000 Ar, ohatra, ireto manaraka ireto: ny fandrorana sy ny fandrehofana ary ny famaniana eny rehetra eny. Fanariana diky amin’ny toerana rehetra ivelan’ireo fotodrafitrasa natokana ho amin’izany.Tsy fahadiovan’ny trano fonenanaAnisan’ny andoavana sazy 50 000 Ar koa ny tsy fahadiovan’ny trano fonenana sy ny miankina aminy ary ny lalana manoloana azy. Ny fandefasana mafy loatra ny zavamaneno, ny fahitalavitra, ny fitaovana maneno ao an-tokantrano… Ny biby fiompy mirenireny sy ny fivarotana zava-pisotro misy alikaola ivelan’ny toerana voatokana na ankalamanjana koa, mbola andoavana 50 000 Ar.Andoavana 300 000 Ar kosa ny tsy fanajana ny ora fisokafana amin’ny 6 ora maraina sy ny fikatonana amin’ny 9 ora alina ho an’ireo mpivarotra zava-pisotro misy alikaola. Ny fivarotana amoron-dalana amin’ny lalam-bahoaka na koa ny varotra amin’ny toeram-pisakafoana mifindrafindra tsy nahazoana alalana. Andoavana 300 000 Ar koa ny fametahana petadrindrina sy sorabaventy sy kisarisary na soratra tsy nahazoana alalana. Eo koa ny fampiasana ny fantsakam-bahoaka amin’ny fanasana lamba na fiara. Ny tsy fandraisana fepetra ialana amin’ny fihandronan’ny rano eo an-tokotany, toy ny fanotofana izany… Ny fampiasana ny lalam-bahoaka ho amin’ny tombontsoa manokana.Dimy tapitrisa ariary… karaokeAnkoatra izany, andoavana 1 000 000 Ar ny fanapoahana sy ny fivarotana tsipoapaoka, afomanga tsy nahazoana alalana amin’ny CUA. Tahaka izany koa ny tsy fandraisana fepetra ho fisorohana tsy hiparitahan’ny feo amin’ny trano. Ny famindrana razana matin’ny pesta mialoha ny fito taona. Ny tsy fandokoana ny trano manamorona ny “avenue” sy ny arabe migodana.Etsy andaniny, andoavana hatrany amin’ny 5 tapitrisa Ar ny tsy fanatanterahana ny fandrodanana trano mety hitera-doza. Ny fampiasana ny lalam-bahoaka amin’ny fanorenana vonjimaika, mihoatra ny 48 ora. Anisan’ny andoavana hatrany amin’ny 5 tapitrisa Ar koa ny tsy fanajana ny fahadiovana sy ny tsy fiparitahan’ny feo ary ny ora fikatonan’ny karaoke. Manampy ireo ny famatsiana zava-pisotro misy alikaola ireo mpivarotra tsy ara-dalàna.Sazy 5 000 ArSazy 5 000 Ar kosa ny tsy fanariana ny fako amin’ny ora voatondro, amin’ny 4 ora hariva hatramin’ny 8 ora alina. Ny fanaovana ny asa fangatahana rehetra, arahina zaza tsy ampy taona. Fangatahana eny an-dalana ka manelingelina sy mampitahotra ny mpandalo. Fanaovana ny toeram-bahoaka ho fonenana na fatoriana… Eo koa ny fanahazan-damba eny amin’ny lalam-bahoaka.Ampahany ihany amin’ireo fandikan-dalàna andoavana sazy vola, tafiditra amin’ny CMH, ireo.Synèse R.L’article Fehezam-pitsipika ho an’ny fikoloam-pahasalamana – CUA: sazy 50 000 Ar ny fandrorana sy ny famaniana eny an-dalana… a été récupéré chez Newsmada.
Ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina: «Hametraka Antananarivo madio sy milamina isika»
Hampahafantarina ny rehetra, anio, etsy amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely ny “Lalàna amam-pitsipika mifehy ny fahadiovana – CMH). Iarahan’ny CUA miasa amin’ny Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) izany amin’ny alalana fifanaovan-tsonia fiaraha-miombona antoka eo amin’ny roa tonta. “Tonga ny fotoana hametrahana an’Antananarivo sy hamerenana ny hasina ka ho tanàna madio, mazava, milamina ary maoderina”, hoy ny fanambaran’ny ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina.Tsy fotoan’ny gaboraraka sy tsy fanajana lalàna…Nohitsiny fa niainan’ny mponina Antananarivo nandritra ny fotoana maro ny korontana, ny kolikoly, ny fitohanan’ny fifamoivoizana, ny gaboraraka, ny fanorenana tsy ara-dalàna, ny tsy fandriampahalemana sy ny tsy fanajana lalàna… “Tanànantsika ity sady Renivohitr’i Madagasikara ka tsy azo ekena intsony izany”, hoy ihany izy.Araka izany, hisy ny fampitaovana samihafa sy fanofanana ary fanentanana, hotanterahina anio, mifandraika amin’izany fahadiovana amin’ny lafiny rehetra izany.Fanambin’ny CUA ny fahadiovanaHo fantatra eo koa ireo lalàna sy fitsipika mifehy izany fahadiovana izany. Ny fizarana ny andraikitry ny tsirairay satria fanamby ho an’ny CUA ny fahadiovana. Tsy maintsy jerena sy apetraka miaraka amin’izany ny rafitra hampiharana ny CMH.Synèse R.L’article Ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina: «Hametraka Antananarivo madio sy milamina isika» a été récupéré chez Newsmada.